मिटरमा जाने ट्याक्सी! :: सुदीप श्रेष्ठ :: Setopati
मिटरमा जाने ट्याक्सी!
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, असोज ३०
ट्याक्सी भन्नेबित्तिकै ‘मिटरमा चल्ने सार्वजनिक सवारी’ बुझ्नुपर्छ। हामीकहाँ भने त्यस्तो सवारी बुझिन्छ, जहाँ गन्तव्य हेरेर भाडाको मोलमोलाइ हुन्छ। जहाँ चालकलाई मनलाग्दी भाडा असुल्न छुट छ। जहाँ चालकले मन लागेको ठाउँमा मात्र जान्छु भन्न पाउँछ।
यही प्रवृत्ति तोड्न भन्दै केही युवाले राजधानीमा नयाँ ट्याक्सी सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन्, जसले मिटरभन्दा बढी भाडा नउठाउने दाबी गर्छ।
‘सारथि क्याब’ नामको यो ट्याक्सी सेवाले उपत्यकाको जुनसुकै कुनामा जुनसुकै बेला सेवा दिने र ग्राहकले मिटरभन्दा बढी भाडा तिर्नु नपर्ने सञ्चालक बताउँछन्।
‘भनेको समय ट्याक्सी नपाउनु र पाए पनि मिटरमा जान नमान्नु हाम्रो पुरानो रोग हो। सरकारले ट्याक्सी भाडादर तोकेर बिलसमेत दिनुपर्ने नियम बनाएको छ। हामीकहाँ भने विरलै कार्यान्वयन हुन्छ,’ सारथिका एक सञ्चालक प्रकाश न्यौपानेले सेतोपाटीसँग भने, ‘हाम्रा हरेक ट्याक्सी मिटरमा गुड्छन्, बिल दिन्छन् र ग्राहकले भनेको ठाउँमा पुग्छन्।’
कम्पनीले आफ्नो सेवा सुनिश्चित गर्न प्रत्येक ट्याक्सीमा यन्त्र जडान गरेको छ। त्यही यन्त्रका माध्यमबाट चालकका प्रत्येक गतिविधिमा निगरानी राखिन्छ। चालक मिटरमा जान माने–नमानेको त्यसैबाट थाहा हुन्छ।
‘उपभोक्तालाई दुःख दिने चालकसँग हामी सहकार्य गर्दैनौं,’ न्यौपानेले भने, ‘उपभोक्ताको उजुरीमा पनि पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ।’
उनका अनुसार सारथि क्याबका २५ ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। उपभोक्ताले ९८१०१००६०० नम्बरमा फोन गरेर सारथिको ट्याक्सी सेवा प्रयोग गर्न सक्छन्। कलसेन्टरमा आउने फोनका आधारमा कति बेरमा ट्याक्सी पठाउन सकिन्छ भनी यात्रुलाई जानकारी गराइन्छ। त्यसपछि गुगल म्यापबाट ग्राहकको लोकेसन हेरेर ट्याक्सी भनेको ठाउँ पुग्छ। ग्राहकले ट्याक्सी चालकबाट अनिवार्य रसिद पाउँछन्। भिसा कार्डबाट पनि पैसा तिर्न मिल्ने गरी भुक्तानी मेसिन जडान गरिएको सञ्चालक न्यौपानेले जानकारी दिए।
सूचना प्रविधिमा चासो राख्ने दुई युवा मिलेर यो सेवा सुरु गरेका हुन्। यसका सञ्चालकमध्ये न्यौपाने कम्प्युटर साइन्स र रवि सिंहाल इलेक्ट्रोनिक्सका विद्यार्थी हुन्। उनीहरूले एक वर्षको अध्ययनपछि एक महिनादेखि परीक्षणका रूपमा सेवा सुरु गरेका छन्। यसको औपचारिक सुरुआत भने भएको छैन।
[caption id="attachment_97022" align="alignnone" width="5616"] सारथि क्याबका सञ्चालकद्वय प्रकाश न्यौपाने र रवि सिंहाल।[/caption]
यसअघि न्यौपाने अनलाइनबाट हवाई टिकट बिक्रीमा संलग्न थिए भने सिंहाल डिजिटल मार्केटिङ गर्थे। उबर, ओलाजस्ता कम्पनीले डिजिटल प्रविधिबाट विभिन्न देशमा ट्याक्सी सेवा दिँदै आएका बेला यी दुई युवाले नेपालमा पनि त्यस्तै जमर्को गरेका हुन्।
यसको बिजनेस मोडल पनि उबर र ओलाकै जस्तो छ। कम्पनीले विभिन्न ट्याक्सी सञ्चालकसँग छलफल गरी उनीहरूलाई आफ्नो संरचनामा आबद्ध गराउँछ। कम्तिमा एक हजार ट्याक्सीबाट सेवा सुरु गर्ने उनीहरूको योजना छ। कम्पनीले अहिल्यै ३ सयभन्दा बढी ट्याक्सीसँग सम्झौता गरिसकेको छ।
‘हामीले सानो संख्याबाट सुरु गरेका छौं, एकैचोटि ठूलो स्तरमा जाँदा व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो,’ न्यौपानेले भने, ‘थोरैबाट सुरु गरेर यसमा आउनसक्ने समस्या पहिचान गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ।’
उनका अनुसार सारथिसँग जोडिन हरेक ट्याक्सीले केही सर्त पालना गर्नुपर्छ। बैंकिङ कारोबार, ट्याक्सीमा सारथिको प्रविधि जडान, कानुन पालनाजस्ता अनिवार्य सर्त छन्। सम्झौता भइसकेपछि सारथिले चालकलाई प्रविधि सञ्चालन, ग्राहकसँग गर्ने व्यवहार, ट्राफिक नियम पालना, समय पालना लगायत तालिम दिन्छ।
‘कुनै यात्रुले ट्याक्सीमा सामान वा पैसा छाडे सम्पर्क गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘ट्याक्सी चालकहरुलाई हामी यसको पनि तालिम दिन्छौं।’
कुनै प्रचारबिना दैनिक २ सय कल आउने गरेको उनले बताए। पछिल्लो एक महिनामै कम्पनीले ७ हजारभन्दा बढी बुकिङमा सेवा दिएको छ। कल सेन्टरमार्फत् सेवा दिइरहेको कम्पनीले छिट्टै मोबाइल एप र एसएमएसमार्फत् बुकिङ सुविधा दिने तयारी पनि गरिरहेको छ। मोबाइल एप बनाउने काम भइरहेको र एसएमएस सेवाको निम्ति टेलिकमसँग छलफल चलिरहेको न्यौपानेले जानकारी दिए।
‘उपभोक्ताको हितविपरीत काम नगर्ने सर्तमा जुनसुकै ट्याक्सी सञ्चालक सारथिको प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्छन्,’ उनले भने।
चालक र सम्बन्धित व्यवसायीको व्यावसायिक हित ग्यारेन्टी गर्ने पनि उनले बताए।
‘हाम्रो प्रणालीमा चालकदेखि मालिकसम्म सबैलाई फाइदा छ,’ उनले भने, ‘अहिले चालक र व्यवसायीको आम्दानी निश्चित छैन, हामी निश्चित आम्दानी तोक्छौं र त्यो उनीहरूले पाउँछन्, चालकलाई पनि मासिक तलबका साथै रेटिङका आधारमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिइनेछ।’
ट्राफिक नियम पालना, ग्राहकसँगको व्यवहार, प्रविधि चलाउन जान्ने आधारमा चालकको रेटिङ हुने कम्पनीले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ३०, २०७४, १७:००:५४